Ingaba umsebenzi weendaba kunye nabalobi beempendulo kwaye bathengisa imisebenzi ye-PsyOp njengoko benzayo ngemiboniso yeTV? : UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	15 Meyi 2019	• 11 Comments
Nabani olandele iimeko ze-Anne Faber kwaye usandul 'ukubona ukuba icala likaJulie van Espen eBelgium ezindabeni kufuneka liqaphele ukuba kukho imeko engafana nayo. Ukuba silandela imidiya, ezi ndaba ziphela inyaniso. Sifakwe imifanekiso eqinisekisa ubungqina kwaye asibonanga kuphela intsapho kunye nabahlobo, kodwa sibona nezithombe kunye nevidiyo zangempela zabalinganiswa, oko kuthetha ukuba akunakwenzeka ngaphandle kwe nyaniso. Kwinqaku elingezantsi, ndizama ukucacisa ukuba kutheni usenokufuneka ukhange ikhanda lakho.
Okokuqala ngethuba elifutshane.
Sivele ngento ye-'trll factory 'okanye' troll army ', kodwa iRashiya kuphela (iindaba ezitshicilelweyo zisitshela). Nangona kunjalo, lwam amava kukuba loo mabutho aseTroll ngokuyininzi aseNetherlands. Awusayi kubona loo nto kwiimpendulo zam, kuba ndizihluza ngokusebenzisa i-filter-self-set filter. Masithi xa oorhulumente basebenzisana ne-PsyOp (ukusebenza kwengqondo) kwaye bathengise le mpu melelo "ngaphaya komda" (ngenxa yokuba bafumene kakuhle ilizwe labo), udinga umkhosi omkhulu we-troll ukufumana iimpendulo kuzo zonke iifom kunye neengxoxo ze-intanethi kwiintlalo media "ukubeka iliso". Bangathumela ingxoxo ngokusebenzisa izimvo ezifana "Ndimazi" okanye "wayenomhlobo wam eofisi" kunye nezinye iimbono.
Ngokuqhelekileyo abantu abayikujonga ukuba yeyiphi iprofayili ye-Facebook eyasemva impendulo. Akunakufaneka ukuba ngamaxesha onke ukuba abe ngama-fake; ezinokubakho nabantu abakhona ngokwenene.
Usenokuva ngegama elithi Inoffizieller Mitarbeiter. Ngaphantsi kwe-Stasi ye-East German GDR, abo babe ngabasebenzi abathulekileyo, abafihlakeleyo, okomzekelo, bagcina isohlo kubamelwane babo. Kwabikwa kuthiwa ngamashumi amahlanu ngelo xesha. Unokholo lokuba le nto yanyamalala ebusweni bomhlaba emva kokuhlanganiswa kweMpuma ne-West Germany. Andiqinisekanga ngoku. Andiyi kulawulo - ngokubhekiselele kumava am nazo zonke iimpendulo kwiminyaka - ukuba iNetherlands inomkhosi omkhulu we-troll ukulungele ukuqhuba iingxoxo zentlalo zentlalo ngokubhekiselele kwisicatshulwa esinokwenzeka.
Ngaba uyazi ukuba uJohn de Mol uqobo lwe-ANP? Uyazi ukuba uJohn de Mol waba nobutyebi? Ngokukhulu ngokuthengiswa kwemiboniso yeTV ephumelelayo. Uyazi kuzo ezibonisa njenge-Holland's Got Talent. Emva koko bavavanywa kulezo zimbalwa zabantu baseDatshi kwaye xa bebamba, bathengiswa ngaphesheya komda njengengcamango kwaye bafumene kakuhle. Ngexesha le-Zaanse vloggersrel, ndakwazi ukujonga (kubonga kwimifanekiso enikezelwe ngumhlobo owayehlala kwindawo yokuhlala) indlela yokubanjwa kwakunzima emsebenzini oqondisa i-vloggersrel epheleleyo. Kwacaca ukuba kwakukho ulawulo. Kwakhona kwacaca ukuba, umzekelo, ukuboshwa kuthathe ixesha elide, kuba i-cameraman kwafuneka ihambe kwindawo efanelekileyo. Kungekudala ngaphambi kokuba, iinduna ezaziphikisana phambi kwekhamera zazihleka ngokuhleka. Ukuthi i-Zaanse vloggersrel yayisisigxina ngokupheleleyo kwaye ilawulwa kuyo. Lezo mifanekiso unakho apha sibone kwakhona.
Ndiye ndixubusha ngokuphindaphindiweyo ngamacandelo anokufakela abalinganiswa. Ndingathanda ukuphinda kwakhona ukuba ngabafundi abatsha. I-Deepfakes zenziwe nge-software ye-GAN. Le yesoftware ehlakaniphile eyenza ukuba, ngokusekelwe kwiinkqubo ezininzi ze-AI kwinethiwekhi, idala abalinganiswa ngaphandle kwento. I-A yiNgesi yesiNgesi soBuchule; yintoni emele ingqiqo yolwazi. Enye inethiwekhi ye-AI ivavanya imifanekiso eyenziwe yintanethi yokuqala kwaye iyayivuma okanye iyayivuma. Ngokwenza oku kumjikelezo, abalinganiswa baqala ukunyaniseka kwisinyathelo ngasinye, ukwenzela ukuba ekugqibeleni unokuzalisa abantu abaqhelanisayo ababukeka njengabantu abaqhelekileyo (oza kuhlangana kunye nesitalato). Kwiminyaka icandelo lefilimu liye lakwazi ukudala abalingani abangekhoyo, umthuthukisi wekhadi lomfanekiso uNVIDIA uqinisekise ukuba unokukwenza ngoku ngokubhekiselele kwiPC yemidlalo (bonayo apha). Inkampani efanayo (i-NVIDIA) inakho ukudala iindawo ezibonakalayo. Jonga kwividiyo engezantsi uze uqhubeke ufunda.
Ngoku kukho iprojekthi kwimarike apho unganika unxibelelwano olubukhoyo emva kwe-webcam kwi-PC eqhelekileyo kwaye ufake ubuso kunye nesandi somnye malunga nalo. Oku kwenziwa ngexesha langempela kwaye kungekho ziphazamiso. Uyakubona oku ngezantsi (funda kwakhona phantsi kwevidiyo).
Ukuba ungeze zonke ezi zixhobo ezikhoyo kunye, ngoko unako ukudala nayiphi na umntu oyifunayo, kwaye unokwenza kwakhona imbali yalo kwaye wenze konke kubonakale ngathi kufana nobomi. Ngokomzekelo, unokwenza umboniso we-Anne Faber kwiminyaka embalwa edlulileyo, kunye noyise emotweni, kwaye wenze wonke umntu akholelwe ukuba oku kwenene. Okanye ngaba mhlawumbi kungekho ukucinga, kodwa ngaba yinto eyenzekayo kuphela ekusebenzeni? Ngaba unokuyihlola? Sinokuqiniseka ukuba oorhulumente kunye namajelo ashicileli iindaba eziyinyaniso kwaye sinokukholwa ukuba iinkonzo zamfihlo ziphuhlisa ubuchule bokufumanisa i-depthfakes, kodwa ngaba awanjalo nje ngabavelisi bezo zinto ezinzulu?
Ngoko ukuba uJohn de Mol, ongu-billionaire, umvelisi omkhulu weTV kunye nomnini we-ANP (Jikelele we-Dutch Press Agency) kungenzeka ukuba abe neendlela zonke kwaye kufuneka ngoko kubonwa ukuba unako ukuvelisa i-depthfakes, ngoko kufuneka sihlekise xa umntu emele ubonisa ukuba kunokwenzeka ukuba sinokudukiswa? Ndabona kwakhona, ndibonise amaxesha amaninzi (kuba andizange ndibonise kwimiboniso zixhaswe ngezinto ezibonakalayo sa si khohliswa). Ingaba kukho ukuba kubi kangangokuba eso script, njengomboniso omkhulu weTV, sithengiswa phesheya, kuba uye wafakazela ukuba uphumelele?
Kutheni ba fanele
"Ewe, kodwa iVrijland, kufuneka kube nenjongo yokukhohlisa abantu kwizinga elikhulu kangaka? Ngubani owenza loo nto!"Emva koko kufuneka uqaphele ukuba yimiphi imithetho emitsha esetyenziswayo, kungekudala emva kwesiganeko esinjalo njengesiko lika-Anne Faber. Kwamanyathelo ambalwa ndachaza ukuba kutheni icala lika-Anne Faber (apho uMichael P. owayengummangaleli) yayinokwenzeka ukuba i-PsyOp (ukusebenza kwengqondo). Ukusebenza ukunyanzelisa imithetho emininzi. Umthetho abantu abanakuze bamkele phantsi kweemeko eziqhelekileyo. Kule nto, kwenzeka ukuba kwenzeke ngokukhawuleza.
Ingxaki, Ukuphendula, Isisombululo
Makhe ndiqale ngokuchazela kwakhona indlela amajelo angayidlala ngayo le mdlalo ye-PsyOp kunye noko Ingxaki, Ukuphendula, Isisombululo imilinganiselo kukuba kubonakala ngathi isetyenziswe ixesha kunye nexesha ukuze sibone oko sikubona kule Julie van Espen kunye ne-Steve B..
Yiyiphi loo mivuzo ngoko Ingxaki, Ukuphendula, Isisombululo? Oko ufana noorhulumente okwenzayo kukuba: Udala ingxaki yentlalo ngempembelelo enkulu (Ingxaki) luchukumisa impembelelo enomsindo phakathi kwabantu (impendulo) kwaye unokuphumeza imithetho emitsha kunye nemilinganiselo engavumelekanga yamkeleka (isisombululo). Emva koko uthabatha ngamazwi afana "Urhulumente uye wahluleka ekukhuseleni uluntu olulindele kuwo", Njengasandul 'ukuza evela kumphathiswa waseDutch uSander Dekker.
Ngoko ke unokusebenza kunye nezicwangciso ezichazwe ngasentla ukudala loo ngxaki. Enyanisweni, kuthetha ukuba awukwazi ukuvavanya nayiphi na intetho, intetho okanye nayiphina imifanekiso enyanisweni. Ngoko awukwazi ukukholelwa akho amehlo. Ithelevishini kunye neminye imithombo yeendaba ziyakwazi ukuphefumula ubomi kubomi abangabikho. Nokuba ucinga ukuba ibhalwe phantsi ngefowuni kwaye ingaba ivela kwikhamera yokhuseleko, awukwazi ukuba unyanisekileyo. Yonke into inokwenzeka kwaye akukho nto engenakwenzeka kwihlabathi leendaba. Kufuneka uhlale unika ingqalelo kuyo isisombululo ilandela emva nje kwesi siganeko esikhulu.
Amanqaku emibuzo kwimeko ye-Anne Faber
"Kodwa iVrijland, ukubulawa kuka-Anne Faber kwakunokwenzeka ngokwenene?"Ewe, unako, kuphela kwinqaku lamanqaku endandibhala ngawo (jonga apha) Kuye kwacaca ukuba kuye kwaba yinto engalindelekanga. Yiyiphi ibhinqa elincinane elihamba ngebhayisiki ukuqala ngesiphepho esilindelekileyo kwaye iqala ukuhamba ngebhayisikili kwindlela ye-ANWB kwaye kutheni iingubo zakhe zifunyenwe ngomhla we-3 Oktobha kwaye zithatha iintsuku ze-6 ukuba zidibanise ne-DNA noMichael Panhuis? Oku akunjalo ngokuchanekileyo. I-NFI inokukwenza oko ukwenza kwiiyure ze-6. Kutheni uMichael wasasaza zonke izinto ezithe zafunyanwa kuye kwaye kuthiwani ngokuphathelele kwakhe? umkhweli wokuhamba kunye noAnn Faber emva? Kutheni waqala wangcwatyelwa waza watshisa kwaye kwakhona ukuba bangcwatywe? Kutheni kubakho ingxelo ye-forensic kunye ne-autopsy nga boniswa kwimeko yetyala? Hayi kakuhle, kwaye kukho imimiselo emininzi kule meko, kodwa ngokuyininzi ngenxa yokuba ubonile imifanekiso yabazali abangokomzwelo, ukholelwa kuyo. Ibali elixhamlayo kunye nokuzingela (Ingxaki) abachaphazelekayo babechukumisa abantu ngokubanzi kwaye ke kwaba khona impendulo ukuze bamkele imithetho emitsha (isisombululo). Oku kuya kwenziwa ngoku wakho ngumntwana okanye kwenzeka kuwe:
UDekker kubiza ukuba 'ayithandekanga' ukuba abo basolwayo abafuna unyango kwi-TBS abangabaleka ngokungahambelani nophando kwaye oku akunakwenzeka.
Ukongezelela, ukuhlolwa kobunzima kunye nohlalutyo lolwaphulo-mthetho lwenziwa ngamandla. Iingozi zobuntu xa kunikezelwa inkululeko kubanjwa kubaluleke ngakumbi.
Ngamafutshane: uphando kwiimeko zengqondo ziba mandunya kwaye ke sicinga ngoMichael Panhuis kwaye ngoko siqinisekile ukuba kufuneka. Inyaniso yokuba abemi abaninzi oku kuthetha ukuba baya kufakwa ekuhlaleni ummandla wobomi (kwaye ngoko balahlekelwa ngamalungelo onke abantu), emva kokufumana uviwo oluvakalayo, kuthetha ukuba nabani na ofuna ukuhlaziywa ngengqondo ngelo i nga thunyelwa kuwo. Ngoko ke amanye amapolisa aseburhulumenteni.
Icala lika-Anne Faber kunye noMichael P. ngoko liyancipha njengehora emoyeni kwaye kubonakala ukuba ibali liye lahlelwa ngezinga elikhulu kunye nentsebenziswano yamagosa, abeendaba kunye nezopolitiko ukuba baphumelele kwimithetho emitsha ayisoze yamkelwa ngabantu. Ngokudlala abantu kakhulu emoyeni, abantu baqinisekile ukuba bayakuthanda utshintsho olunjalo lomthetho, kuba wonke umntu udibanisa ne-monster uMichael P.
Amajelo asincede siqiniseke ukuba konke kuya kwenene, kodwa asisoze sakwazi ukuzihlola thina kwaye kufuneka sicinge ukuba asiyidlala ngeendlela zaseHollywood. Isiphumo kukuba abantu banokutshutshiswa ngengqondo ngaphandle kwesizathu kwaye banokuphelelwa yintyala zabo bonke ubomi babo, kuba umthetho awusayibakhusela.
Kuthiwani ngoJulie van Espen noSteve B.?
Oko kwangoko kwavela kwintetho kaSteve B. yinto elandelayo vrt.be:
Ngokweenkcukacha zethu, imifanekiso yayiya kufakwa kwiifoto kwintlalo yophando ngaphambi kokuba ihanjiswe njengengxelo yophando (bona isithombe esezantsi, ushiye umfanekiso ochitshiweyo wesithunzi - kanye nekiso weskrini yokuqala). Amapolisa ayesazi ngokukhawuleza ukuba akayena nje "ubungqina".
Kutheni na ukuba amapolisa "atyunde ibhaskithi uSteve B. wayephethe" ngenjongo yophando? Ungatsho ukuba benza njalo ukwenzela ukuba bangabonakali nantoni na amangqina, kodwa usenokuthi nabo sele beyazi ukuba uStep B. unokudibaniswa noJulie ulahlekile ngenxa yokuba wayehamba ngebhayisiki yakhe . Ungathi kwakhona: nantsi sibona ubungqina obuphilileyo bokuthi imifanekiso elula iyakwenziwa njani kwaye sibona apha ubungqina bokuba oku kwenzekayo.
Into ebetha ngakumbi kukuba akuyena uyise wexhoba owakuthethayo, kodwa uyise oyise. Kwimeko ye-Anne Faber sabona umalume owayengowokuqala ukuthetha. Kuphela emva koko abazali baqala ukubonakala. Ndiyaqhubeka ndibonisa inketho yeengcamango kunye nabadlali, apho imifanekiso inokusetyenziswa ngokufanelekileyo kwaye ubuso obutsha bunokufakwa lula kwi-intanethi (kubandakanywa i-voice overlay). Umkhosi we-social media we-troll olungele ukusho "yayingumhlobo okanye ulwazi lwe .."Ukholelwa abantu ukuba baxoshe ukungathandabuzeki kokugqibela.
Ekukhangekeni kukaJulie, umnxeba omkhulu wenzelwa ukukhangela kommi. Oku kunokwenzeka ukuba kube nefuthe elikhulu kuluntu kwaye kugxininise bonke abantu ngolu hlobo. Ngokuqinisekileyo lo mphoso naye ubonakala ephethe udlwengulo odlulileyo kwaye ngoko unokuyithatha into yokuba silapha kwakhona Ingxaki, Ukuphendula, Isisombululo sibone isenzo, kunye nomthetho omtsha (nakwiBelgium) ukuba wonke umntu angabambelela ixesha elide okanye afune unyango lweengqondo (nokuba umphathiswa wengqondo uyakubona oku kuyimfuneko okanye akunjalo). I Default.be iingxelo:
"Inkundla igwebe ummangalelwa kwisigwebo sejele iminyaka emine ngenxa yokudlwengula nokusela." Yiloo ndlela yathetha malunga neminyaka emibini edlulileyo, ngomhla we-30 Juni 2017, kwiNkundla yase-Antwerp. Nangona kunjalo uSteve B. akazange ahambe entolongweni ngaloo mini. Umtshutshisi woluntu wacela ukuba abanjwe ngokukhawuleza, kodwa inkundla ayizange iphendule kule nto.
B. naye wabhenela. Ngenxa yoko, wayengekho wokugqibela kwaye wahlala ekhululekile kwaze kwafika isigwebo.
Unina uyangqina ukuba, ngenxa yakhe, wakhululwa phantsi kweemeko ezithile. Umfazi lowo, ofuna ukuhlala engaziwa. "Akazange ambone uSteve njengesigebengu. Le nkwenkwe ifuna nje uncedo, wacinga. Kwaye ukuba singamnika loo nto? Senza oko. "
Kule nto unokwenene sele ukhonaisisombululoufunde. Mhlawumbi emva kwalolu hlobo abantu baya kuqiniseka ngokuphela kokukhutshwa xa kufaka isikhalazo kunye nejaji (kungekho ngaphezulu, kodwa kuphela i-1) kufuneka igwebe nokuba umntu makangayi kuvaliwe kwikliniki. Ukuba loo mithetho inokuthi ithintele wonke umntu uphuhliswa ngumsindo wokudabuka komntu apho kuthethwa khona abantu abasesikweni (ecatshulwayo) kwi-PsyOp.
Phendula umbuzo kwisihloko
Umbuzo ovela kwisihloko esithi "Ngaba wenza umsebenzi weendaba kunye nabalobi beempendulo kwaye bathengisa imisebenzi ye-PsyOp njengale nto yenzeka nge-TV show?", Impendulo ngoko ke inokuba nguOYE kuphela. Ngokuqinisekileyo kukho abantu abambalwa abanebhotela ezintloko zabo, kodwa ngokuqinisekileyo abo bantu banomvuzo omhle okanye banokuzibiza ngokuba yi-billionaire kwaye banandipha yonke i-luxury they want. Awazi; awukwazi ukuyihlola; awukwazi ukufumana umunwe wakho kuze kube yilapho umntu emela khona aze abonakalise yonke into esuka ngaphakathi. Nangona kunjalo, ithuba lokuba oku kuza kwenzeka kuncinci, kuba abathathi-nxaxheba mhlawumbi bamnyama. Ngaphezu koko, zonke iindawo ezincinci ze-Psychological Operation mhlawumbi zidibeneyo kangangokuba abaninzi abazi ukuba ziyingxenye yeskripthi se-PsyOp.
Emva kukaThijs H., umyalelo osesikweni wokubanjwa, ukugcinwa kwirejista yangaphambili, iya kumkelwa ngumntu wonke
Imfazwe ye-Ismail Ilgun vlogger yinto nje isenzo sokunqanda ukufowunelwa kwesitalato
tags: ai, ANP, de, nzulu, deepfakes, inja, eziziimbalasane, ifilimu, script, zeempendulo zefilimu, GAN, John, Mo, sebenza, imisebenzi, abavelisi. psyop, yengqondo, elishicilelwe, isoftwe, le, tv, inqwelo
16 Meyi 2019 kwi-06: 52
Omnye umzekelo we (kakhulu unokwenzeka) PsyOp, Thijs H.
Nenye enye apha:
(Injongo: zonke izixhobo kufuneka zivinjelwe, kubandakanywa neziphambano)
16 Meyi 2019 kwi-06: 54
Iindaba ezingakumbi zokukhohlisa ukuqinisekisa umthetho oqalisiwe?
John.S wabhala wathi:
16 Meyi 2019 kwi-14: 04
Ucinga ntoni ngale nto, kwiklasi yokuqala ye-PsyOp:
17 Meyi 2019 kwi-13: 22
Inene ibali elingaqhelekanga kwakhona, njengoko uSam G wahlala enamhlanje kwiintsuku ezintathu! Emva koko ibhomu yayiye yaqhekeza ngokugqithiseleyo kwaye loo mlimi othungayo uyamazi ngalo, ayikho enye indlela, bekufuneka ukuba yaziswe.
Kwaye ke ngaphandle koko ufumana amatya amatsha kuzo zonke iingcango kwaye unjalo kwaye unayo inkinobho ye-alamu
Abantu benza okuninzi ngemali, ngoku sifumene
16 Meyi 2019 kwi-14: 07
Iwebhusayithi yeRtvUtrecht isanda kutshicilela iindaba ze-PsyOp. Bakha nzima kuwo kwaye bazame ukukhohlisa abafundi.
16 Meyi 2019 kwi-19: 07
Inqaku elihle ngokwenene kwakhona.
Isivakalisi sokugqibela ngokukodwa kubaluleke kakhulu.
Oko kudla ngoku kuphakanyiswa apha kule ndawo yividiyo ye-hypnotist eyenza abantu bakholelwe ukuba i-lemon enomuncu iyakuthanda njengemango enhle okanye into efanayo.
I-hypnotist yeyona nto iyazi ukuba oko akuyinyaniso, kodwa i-hypnotist iya kukholelwa ukuba uyadla imango elimnandi kwaye uya kuqhubeka ebiza ukuba uyadla imango elimnandi kuba uyakholelwa ukuba
Kule nkqubo, ezi "zixhobo ezincedo" ezingasetyenziswa.
Ngoko unama-hypnotist kunye ne-hypnotized or combination of the two.
17 Meyi 2019 kwi-10: 02
Ndikulungele ukufunda ukuba uya kuhlala ixesha elithile, izinto zihamba ngokukhawuleza ngoku ngokubona okucacileyo izinto ezizayo ezilindeleke kakhulu.
Akusiyo ngokupheleleyo isihloko oku kufuneka ukuba, loo nkwenkwe idlala kunye nabahlala kwisiteshini sakhe, i-guts ukuthetha.
U-Israyeli uchitha ihlabathi, kufuneka uqaphele.
Karel Reuterz wabhala wathi:
17 Meyi 2019 kwi-10: 28
Ewe, ndiyakholwa ngokwenene. Ama-parasites angenantloni yamandla angadani nantoni na.
Imibhalo yeempendulo zeMfa ibhaliwe, iincwadi zisonto ngamabomu kwaye zenziwe (uxwebhu oluqhotyoshelweyo)
Kulula kangakanani ke? ukubhala iimpendulo zemithetho ebalulekileyo ekuthandweni kwamandla. Eli qela landa ngamanani amaninzi, olahla iindaba zeFerer njengezindaba ezikhohlisayo.
1-12.47 ngcaciso emfutshane kule docu ephezulu >>>>>>>>>
Ngoku siyazibona sisekhompuma esempuma kwaye nangona iziganeko ziqhubeka ngoku, utshintshiselwano
yolwazi ngoku kulula kwaye lusebenza kakuhle ngoncedo lwezixhobo ezahlukeneyo zezobugcisa kodwa ke abantu
kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi unama-radicaly ulwazi oluthile malunga nalowo ulwa ngubani .......... ngubani na amaqela athatha inxaxheba? ............... ..
Ngoko, ukuba kunokwenzeka ukuba bakhohlise abantu malunga neemeko ezenzekayo phambi kwamehlo abo, kungaba lula kangakanani ukuzikhohlisa ngezinto ze-100 zintathu zeminyaka edlulileyo.
17 Meyi 2019 kwi-23: 51
020 msm ukugubha! iindaba ezibuxoki
22 Meyi 2019 kwi-21: 17
Intlekisa ukuba iqela malunga neefilimu ezintle ezibuxoki ziboniswa ngePutin. Nantsi enye enye, kodwa evela kumaphephandaba aqhelekileyo:
Ngaba abantu bahlala bekulungele ukulungiselela ithelevishini?
12 Juni 2019 kwi-19: 29
Usuku oluhle 9-11 Journaal Nederland
Eyesithoba elinesibhozo, mhlawumbi i-PSY-OPP eyiyo? Ukuba uHeineken ukuthumba, isicatshulwa esihle
kwaye ngoku i-pleps ingabuza imibuzo malunga nomdlali we-Holleeder kwi-het Parool, enhle
« Ixesha lokucima le website? QAPHELA 15-05-2019
Inyaniso eyona nto ayikho? »
Iindwendwe ezipheleleyo: 13.125.180